Ny fitsangantsanganana an-dalamby no fomba fitsangatsanganana ara-tontolo iainana any Eropa. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, The Tranonkala tapakila mora vidy indrindra eto amin'izao tontolo izao.
Mandritra ny andro sy ny masoandro mody, Budapest dia olona mahery setra miaraka amin'ireo vatosoa sy tranokala mahafinaritra. Rehefa mandehandeha eny an-dalambe ianao, ny masonao dia zara raha mitazona ireo mari-toerana tsara indrindra any Eropa. fa, amin'ny alina dia hahita tontolo hafa ianao, ny tontolon'ny trano tsy mendrika dia mitodika any amin'ny bara tsy fahita any Europe, ary ity sehatra tsy manam-paharoa ity dia mametraka an'i Budapest antsika 5 tanànan'ny antoko tsara indrindra any Eropa.
Raha aleon'ny Holandey ny fivoriambe ambany, raha manontany mpizahatany avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ianao, hoy izy ireo fa manana lafiny hafa i Amsterdam. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, in Amsterdam, hahita feo re ao amin'ny ankamaroan'ny klioba ianao, fa koa velona mozika. Ny fampisehoana mivantana dia be mpitia ao Amsterdam.
Ny tanàna fantatsika rehetra amin'ny opera sy fiainana ara-kolotsaina mbola tsy nisy toa azy dia manana fiainana andavan'andro mahafinaritra sy mahafinaritra ihany koa. Mifanohitra amin'ny seho amin'ny takariva amin'ny alina hafa any amin'ny firenena manodidina, Ny toerana fisakafoanana alina any Vienna dia tsara kokoa ary milamina kokoa. Ohatra, ambany ny saram-pidirana miditra ao Vienna miaraka amin'ireo politikam-baravarana milamina.
Ny saram-pidirana dia miovaova isaky ny firenena. Ny ankamaroan'ny tanàna eropeana dia tena lafo vidy, ohatra, Prague sy Budapest, 5-20 fidirana euros sy alikaola amin'ny vidiny mirary, ny toerana sasany dia lafo kokoa, fa ny zava-dehibe indrindra, dia ho avy aloha, ka tsy voatery hijoro ela ao amin'ny filaharana ianao.
Te hampiditra am-peo ny lahatsoratray hoe "Tanànan'ny antoko 5 tsara indrindra any Eoropa" ao amin'ny tranonkalanao ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-party-cities-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)